Xiisad ka dhalatay ciidamo gadoodsan oo ka taagan magaalada Garowe – STAR FM SOMALIA
Xiisad ka dhalatay ciidamo gadoodsan oo ka cabanaya mushaar la’aan iyo xuquuq uga maqan maamulka Puntland ayaa ka taagan magaalada Garowe.
Xalay ayay aheyd markii ciidamadan ay la wareegeen koontaroolka koofureed ee magaalada Garowe, halkaasoo ah kastamka ay wasaaradda Maaliyada ku qaado canshuuraha.
Ciidamadan oo ka tirsan kuwa Daraawiishta ayaa ka cabanaya mushaar la’aan saddexdii sano ee uu jiray Maamulka C/wali Gaas, waxaana ay ku eedeeyeen Wasaaradda Maaliyada Puntland inay dafirtay xuquuqdooda.
Gadoodka ciidamada kala duwan ee Puntland ay sameynayaan ayaa isa soo taraya, waxaana laga cabsi qabaa in ciidamada ku jira furimaha dagaalka inay isaga soo baxaan.
Maamulka C/wali Gaas ayaa wajahaya kacdoon uga imaanaya ciidamada oo ka cabanaya mushaar la’aan iyo xuquuqdooda aan la siin, waxaana siyaasiyiinta Puntland ay shaaca ka qaadeen in Puntland u baahan tahay badbaado, maadaama maamulka Gaas uu waxyaabo badan ku fashilmay.